Ny orinasa mpanodina mpanodina sy mpamatsy - China Factory - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Metric Fasteners > Threaded Rod
Product Introduction of Threaded Rod
Ny tadin'ny tady dia manondro ny tsorakazo mivantana sy lava ampiasain'ny fitaovana sy ny indostria isan-karazany manomboka amin'ny plumbing, elektrika, automobile, fanorenana mavesatra, HVAC, afo solifara, telecom sy sakafo fanompoana. Ny tendron-tsoratry ny tendron-tsoratry ny tendron-tsoratry ny tendron-tsoratry ny tadiny roa dia matetika tendrena mba hanamboatra fitaka manokana toy ny bolongana sy boloky. Ny karazana raozy mahazatra dia ny kofehy matevina na ny tadiny feno, izay ahitan'ny tady ny lavany feno ny tehina.
Ny tadin'ny tady, izay antsoina koa hoe "fixer" tsy misy kofehy, dia azo ampiasaina amin'ny voanjo ary ny mpanamboatra ary azo ampiasaina amin'ny lanjan'ny taham-pahefana na ny fepetra takiana.
Product Parameter amin'ny kofehy
10mm-3000mm, dia azo atao
Carbon Steel, Stainless Steel ary sns.
Zinc plated (chromium triviona na trondro miafina), nikela plastika, okididy plated, vita vita, oksida mainty
Ao anatin'ny 35 andro
Pallets na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fambolena, indostria, fikarakarana ara-pahasalamana sy ny aeropatosy ets.
Ny endri-javatra momba ny vokatra sy ny fampiharana ny lamandy
Ny kofehy maromaro natao ho an'ny kodiarana dia baoritra matevina efa ampiasaina amin'ny alim-pitandremana serivisy, kofehy ary mpanisa. Rehefa tapaka ny lavany, dia ny minisitra kely ihany no azo takiana mba hahazoana maimaim-poana mora foana amin'ny famaranana madio. U-Bolt-Ny tadiny vita amin'ny kofehy dia azo ampiasaina amin'ny habaka marim-pototra ary ampiasaina amin'ny famokarana, fanorenana, famokarana, fambolena, fiara mandeha amin'ny fiara, plumbing, elektrika ary fikolokoloana fanamboarana.
fampiharana:Tetikasa fanorenana trano sy fambolena, tetik'asa fanorenana DIY, indostrian'ny indostria, tapa-tongotra ho an'ny HVAC, fametrahana fanangonana afo, famokarana varotra, famolavolana sy famokarana.
Product Details momba ny kodiarana
Packaging Details:Volom-borona amin'ny kitapo hazo na araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Hot Tags: Threaded Rod, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Made In China, Wholesale, Buy, Customized, On Stock, Bulk, Price, Price list, Quotation, High Quality
GI nozaraina RodNofonosina ny rongony matevinaVovoka Rod Steel